Talaalka COVID-ka ee caruurta da’doodu u dhaxayso 5-ilaa 11 jir.
Ilmahaagu tallaal in uu qaato ma ka cabsadaa? Carruurtu markay tallaalka qaataan xanuun iyo saamayno kale ma ku reebaysaa? Maxaa adiga iyo carruurtaada kula gudboon in aad samaysaan si aad ugu diyaar-garawdaan qaadashada tallaalka?
Waxaan rajaynaynaa in fiidiyawgan macluumaad muhiim ah ay ka heli doonaan waalidiinta iyo caruurtuba.
Tallalka COVID-19: Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo: Kadib Tallalka